मेरो उम्मेदवारी नेपाली क्रिकेटमाथि लागेको ग्रहण हटाउन हो
मेरो उम्मेदवारी नेपाली क्रिकेटमाथि लागेको ग्रहण हटाउन हो चतुरबहादुर चन्द
पंकज धामी शुक्रवार, आश्विन १०, २०७६, ०९:१२:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको निर्वाचन भोली (शनिवार) हुँदैछ । यसपटक क्यानको अध्यक्ष पदको निर्वाचमा दुई जनाबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । अध्यक्षका लागि पूर्व अध्यक्ष विनयराज पाण्डे र चतुरबहादुर चन्दबीच पतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । चन्द २०७२ मा भएको निर्वाचनमा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
यद्यपी राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले निर्वाचन निष्पक्ष र पारदर्शी नभएको भन्दै तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । वर्तमान सदस्य सचिव केशव सिलवालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन भएपछि आईसीसीले क्यानलाई प्रतिवन्ध लगाएको थियो । अहिलेसम्म पनि प्रतिवन्ध फुकुवा हुन सकेको छैन् । यद्यपी चुनावपछि प्रतिवन्ध हट्ने सक्ने विश्वास लिइएको छ । यसै सन्दर्भमा क्यानको अध्यक्ष पदका उम्मेदवार चतुरबहादुर चन्दलाई तपाईको उम्मेदवारी किन ? क्यानको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरेका छौँ ।
१. क्यानको अध्यक्षका लागि तपाईको उम्मेदवारी किन ?
मेरो उम्मेदवारी किन भन्ने विषय स्पष्ट छ । पछिल्लो ४ वर्षमा नेपाली क्रिकेट संघको विवादीत अवस्था सबैलाई थाहा छ । पछिल्लो तीन वर्षयता संघ निलम्बीत भएपछि नेपाली क्रिकेटको अवस्था अस्तव्यस्त छ । अहिले आईसीसीले खेल्नका लागि वातावरण बनाएको छ । पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेटले गरिहेको प्रदर्शनको ब्याकअपको रुपमा उत्पादन हुन सकेको छैन् । यसको कारण घरेलु प्रतियोगिताहरु हुन नसक्नु हो । पछिल्लो ४—६ वर्षयता राष्ट्रिय स्तरका एकदिवसीय प्रतियोगिता, क्षेत्रीय प्रतियोगिता हुन सकेका छैनन् ।
नेपाली क्रिकेटमा त्यस्तो काम गर्ने मान्यता प्राप्त संस्था नहुँदा नेपाली क्रिकेट भित्रि रुपमा कमजोर हुँदै गएको छ । मेरो उम्मेदवारी भनेको नेपाली क्रिकेटमाथि लागेको ग्रहण हटाउनु नै हो । खासगरि आइसीसीको प्रतिवन्ध फुकुवा गर्नका लागि । आइसीसीले दिएको गाइडलाइन र टाइमलाईनमा अहिलेसम्म हामी चलेका छौँ । अबको हाम्रो प्रयास भनेको प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि हुनेछ । अहिलेको वैधानिक प्रोसेसबाट जो आएपनि आइसीसीले सहज रुपमा काम गर्छु भनेकाले निलम्बन फुकुवाको बाटो बन्छ ।
२. २०७२ मा तपाई निर्वाचित भएपछि निर्वाचन पारदर्शी र निष्पक्ष नभएको भनेर सरकारले तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । राखेपले त्यतीबेला हस्तक्षेप गर्नुमा तपाईहरुको आन्तिरिक विवाद मुख्य कारण थियो भन्ने छ ?
त्यो समयमा सरकारले चुनाव गराउन नदिएकै हो । गर्न नदिएपछि पदावधि सकिएका कारण हामीले विधान संशोधन गरेर निर्वाचन गराएका हौं । खेलकुद परिषद्ले पनि अनुमति नदिएपछि हामीले विधान संशोधन गरेर निर्वाचन गराएका हौँ । निर्वाचन समिति बनाएर निर्वाचन गराएपछि राखेपले अहिलेका सदस्यसचिव ज्यूको नेतृत्वमा समानान्तर समिति बनाएपनि उहाँ र मेरोबीचमा त्यस्तो कुनै व्यक्तिगत विवाद हुनुपर्ने कुराहरु छैन् । थिएन र हुँदैन पनि ।
उहाँलाई सरकारले नियुक्त गरेको हो । मलाई साधारणसभाले निर्वाचित गरेको हो । उहाँ एउटा प्रोसेसबाट आउनुभयो, म एउटा प्रोसेसबाट आएकाले त्यस्तो कुनै मतभेद छैन् । तर प्रचार गर्नेहरुले त्यस्तो ढंगबाट लिए । तर निर्वाचित भएपछि काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । हाम्रो अधिकार पनि हो निर्वाचित भएपछि काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने ।
३. २०७२ मा तपाई निर्वाचित समिति विरुद्ध सरकारले सिलवालको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । अहिले पुनः तपाई अध्यक्षका लागि प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ । यदि तपाई क्यानको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनु भयो भने अहिलेको सदस्य सचिवसँग काम गर्न कतिको सहज हुन्छ ?
हामीबीच व्यक्तिगत रुपमा कुनै मतभेद हुने कारण नै छैन् । त्यतीबेला हामी छुट्टछुट्टै प्रोसेसबाट आएका हौँ । तर बजारमा निलम्बन यो भए हुन्छ यो भए हुँदैन भन्ने हल्ला आएका छन् । ति सबै हल्ला मात्रै हुन् । आइसीसीले सबै कुरा गर्छ । अहिले आइसीसीको तीन जना प्रतिनिधिको सहभागितामा यो निर्वाचित हुँदैछ । उसले एउटा प्रोसेस सुरु गरेको छ । जो व्यक्ति यो प्रोसेसबाट आएपनि उसले काम गर्छु भनेको छ ।
तर अर्को हामीसँग कुनै विकल्प पनि छैन् । यहाँ सरकारी हस्तक्षेप मात्रै हुने रिपोर्ट पनि आइसीसी कहाँ गयो भने नेपाली क्रिकेट सकिन्छ । आइसीसीले कुनै सपोर्ट गर्न सक्ने आधार हुँदैन् । त्यत्रो सयौँ देशहरु मेम्बर भएको आइसीसीले नेपाललाई कतिसम्म ह्याण्डिल गर्ला ।
यो भन्दा पहिलो कार्यसमितिसँग मताधिकार हुने । तर अहिलेको कार्यसमितिलाई मताधिकार नहुने भनेको छ । तर यसपछिको कार्यसमितिलाई मताधिकार हुने भन्यो हामीले त्यो सर्त पनि मान्न तयार भयौँ । किनकी एक पटक हामीलाई विश्वास गर्ने जिल्लाका साथीहरुले पुनः विश्वास गरेर मत दिन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामीले आफुलाई प्रमाणित गर्ने अवसरनै पाएका छैनौँ ।
४. क्यानलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने एउटा तर्क छ । तर अध्यक्षका प्रत्यासी तपाईहरु दुबै जना पुरानो मान्छे हुनुहुन्छ । कसरी सम्भव छ त्यो ? अर्को व्यक्तिलाई अवसर दिनुपर्ने समय होइन यो ?
बिनय दाई ४० वर्ष भन्दा बढी समय क्यानसँग जोडिनुभयो । कहिले महासचिव, कहिले अध्यक्षमा बस्नुभयो । उहाँलाई नेपाली क्रिकेटले राम्रैसंग हेरिसकेको छ । के गर्नुभयो भनेर सबैले उहाँको कार्यकाल हेरिसक्नु भयो । मलाई पुरानो भनेर तपाईले भन्दै हुनुहुन्छ भने के आधारले पुरानो ? मैले कार्यकारी पद विनानै क्यानको सदस्य वा अन्य कुनै क्षेत्रबाट नेपाली क्रिकेटको विकासका लागि योगदान गर्न खोजेको हुुँदा तर कार्यकारी पद लिएर मैले काम नगर्दा सम्म त म पुरानो होइन नी ।
एक कार्यकालको लागिे अध्यक्षको भूमिकामा रहेर मैले त्यही किसिमको कार्यदीशामा लैजान सक्छु भन्ने न हो । यथास्थितीमा राखेर नेपाली क्रिकेट अगाडी बढ्न सक्दैन् । त्यसकारण क्रिकेटमा ४० वर्ष विताउनुभएको विनय दाइ ७०÷७५ वर्षको हुनुभयो । उहाँले जति गर्नुपर्ने थियो गर्नुभयो । अहिले जिल्लाहरुबाट पनि मलाई एक पटक अध्यक्ष भएर काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।
म अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि नेपाली क्रिकेट नौलो किसिमले अगाडि बढ्छ । यथास्थितिमा रहँदैन् र रहनुहुँदैन् पनि ।
बजेटका विषयमा के भन्छन् सांसदहरु ? बुधबार सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ बजेटका विषयमा सांसदहरुले मिश्रित प्रतिकृया दिएका छन् । केहीले बजेट वितरणमुखि भएको आरोप लगाएका छन् । भने केही सांसदहरुले पहिलेकै बजेटको निरन्तरता भउको बताएका छन् । बुधवार, जेठ १५, २०७६, १४:१०:००
सग्लो पार्टीको नेतृत्व गर्ने कि टुक्रे पार्टीको ? पार्टी एकीकृत भइसकेको परिस्थितिमा नेताहरुले पदभन्दा कार्यकर्ता र जनताबीचमा आफैं स्थापित हुँदै जानुपर्ने भएकाले यो कुरामा नेतृत्व अल्झेर बस्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । सोमवार, भदौ २, २०७६, १७:३०:००
‘बन्दीपुर गण्डकीको दोस्रो पर्यटकीय क्षेत्र हो, मिनी ग्रेटवाल निर्माण हुन्छ’ आइतवार, श्रावण २६, २०७६, १६:३५:००
बंगलादेशका ११ राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी कोरोनाबाट सङ्क्रमित
सिपिएल खेल्न गएका सन्दिपको कोरोना रिपोर्ट आयो
च्याम्पियन्स लिग: रियल र युभेन्टसलाई पुनरागमन गर्ने मौका
‘जि.स.स.को भूमिकाको बारेमा अझै पनि कतिपय मानिसहरुले कुरा बुझेका छैनन्’